Maxaa kasoo baxay kulankii ay wada yeesheen Axmed Madoobe iyo Cabdi Xaashi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Maxaa kasoo baxay kulankii ay wada yeesheen Axmed Madoobe iyo Cabdi Xaashi
Maxaa kasoo baxay kulankii ay wada yeesheen Axmed Madoobe iyo Cabdi Xaashi
December 8, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Waxaa faahfaahino laga helayaa kulan albaabada u xirnaa oo magaalada Kismaayo ku dhex maray madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi.
Kulanka ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa diiradda lagu saaray arimo la xiriira khilaafka xiligan ee dowlada Federaalka iyo maamul goboleedyada u dhexeeya iyo xal waara oo laga gaaro khilaafkan saameeyey xiriirkii dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Sidoo kale waxaa jiray kulamo kale oo guddoomiya Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi la qaatay golaha wasiirada maamulka Jubaland kaas oo diiradda lagu saaray sida ugu macquulsan ee lagu soo celin karo wada shaqeyntii maamulka Jubaland uu la lahaa dowlada Federaalka.
Ilo xog ogaal ah ayaa Horseed Media u sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Islaam uu diyaar u yahay xiligan heshiis uu la galo dowlada Federaalka walow uu muujinayo tabashooyin u badan hab dhaqanka xiligan ay madaxda Federaalka kula macaamilayaan dowlad goboleedyada iyo faragelin cad uu sheegayo in lagu hayo arimaha doorashooyinka maamul goboleedyada.
Hase ahaatee guddoomiya Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa Axmed Islaam Madoobe u balan qaaday in uu sida wanaagsan marka hore loo turxaan bixinayo heshiiska uu maamulka Jubaland la galayo dowlada Federaalka kadibna la guda galayo amba qadka heshiiska.
Lama oga xiliga madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe kasoo muuqano heshiiska uu la galayo Villa Somalia balse waxaa hubaal ah in xiligan Axmed Maxamed Islaam uu rajo ka muujinayo heshiiska isaga iyo Villa Somalia inkastoo ay jiraan qodobo ay adag tahay in xal looga helo khilaafka dowlada Federaalka kala dhexeeya bmaamulada gaar ahaan Jubaland oo uu madaxweyne ka yahay madaxweyne Axmed Madoobe.